China ibhokisi yekholamu yefestile yabahambi ngeenyawo mveliso kunye nabenzi | Honghua
Ikholamu yebhokisi yokuhamba kwabahambi ngaphezulu
Ikholamu yeBhokisi yeBridge yeBhulorho yama-18M
Abakhweli beemitha ezili-18 bebhokisi yeKholamu yeBhokisi
Ibhulorho ebunjiweyo yentsimbi yezoqoqosho inezoqoqosho kwizithuba ze-10m ukuya kwi-18m, nangona iibhlorho ukuya kuthi ga malunga ne-30m zinokwenzeka. Ibhulorho yentsimbi edityanisiweyo inokwandiswa ngokulula ububanzi. Ukuba i-truss okanye i-bridges ehleliweyo ayifuneki ngezizathu zokwakha, kunokukhethwa iibhlorho zebhanti zentsimbi. Kulula ukuqhuba iinkonzo phantsi kwendlela yokuhamba. Kulula ukuqaliswa kwe-cantilever okoko nje kuqhutyelwa kwibhanki yasekhaya emalunga ne-110% yesithuba. Kungenxa yokuba inye kuphela imiqadi yeemitha ekufuneka isungulwe ngaxeshanye, inkqubo yokwenziwa lula yenziwe lula. Ibhulorho yebram edibeneyo ilungile kwizithuba ezininzi. Qaphela ukuba indlela yokuhamba iya kuba phezulu kunezi zinto ziphantsi kwesixa esimalunga ne-6% yesithuba, oko kunokuthetha ukuba iindlela ezinkulu zokuxinana.
Egqithileyo Isakhelo sodonga lwesakhiwo sentsimbi esibhakabhakeni
Okulandelayo: Ibhulorho yabakhweli yesinyithi yesiphelo